DOWNLOAD Real Stars FS2004
Real Stars avelao ny lanitra ho tena realistika satria amin'izany add-on mampiseho ny kintana rehetra eny amin'ny lanitra hita maso tsy misy maso. (tsindrio ny sary hanitatra)
Ny kintana rehetra hitanao dia tsy napetraka tsikelikely: avy amin'ny BRIGHT STAR CATALOG, 4TH EDITION.
9095 sy kintana dia ampiana amin'ny FS2004 ary izany no mahatonga ny fahasamihafana amin'ny alina amin'ny lohataona!
NITANDRINA : Aorian'ny fanesorana ny kintana Real dia aza adino ny mamerina indray ireo rakitra tranainy! Satria tsy mamerina mamoaka ny antontan-taratasinao voalohany. Mba hamerenana amin'ny laoniny dia mandehana any amin'ny lahatahiry "SAUVEGARDE stars.dat"avy amin'ny FS2004 ary kopio ny rakitra" stars.dat "ao amin'ny lahatahiry fototra ao amin'ny FS2004.
17699 3.00 (14)
By Norbert Pachner, Vienne
Xénon jiro FS2004
20379 4.21 (14)
By Dirk Kurze (Allemand)
31030 3.64 (14)
Downloads 17 699